မီးစက်ကို ၂၄ နာရီအတွင်း ကြိုက်တဲ့အချိန်ပျက်လို့ရပြီ! | PTI Company Limited
ပစ္စည်းသင်္ခါရ လူသင်္ခါရသဘောအရ တန်ဖိုးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေဟာလည်း ပျက်တတ်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့။ တန်ဖိုးလည်းကြီးမားပြီး အရံစွမ်းအင်အတွက် အရေးပါလှတဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ မီးစက်တွေမှာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေ ပြဿနာတွေဟာ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ကြုံတွေ့ကြရမှာပါ။ ဒီလို အခက်အခဲ ချို့ယွင်းချက်ကြုံလာရတဲ့အခါ ပြုပြင်သင့်ရင်လည်း ပြုပြင်ရမှာဖြစ်သလို ထိန်းသိမ်းသင့်ရင်လည်း ထိန်းသိမ်းရမှာပါ။
အကယ်၍သာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တန်ဖိုးကြီးမီးစက်တွေဟာ စက်ချို့ယွင်းလာခဲ့ရင် အရင်ဆုံးသတိရမိမှာက စက်ပြင်ဆရာကိုပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါဆို ညကြီးအချိန်မတော် မီးစက်ပျက်သွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဘယ်သူ့ကို သတိရမိမလဲ။ သေချာတာကတော့ စက်ပြင်ဆရာကိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ညကြီးအချိန်မတော် စက်ပြင်ဆရာကို ဘယ်နားသွားရှာမလဲ။ စက်ပြင်ဆရာရှိပေမယ့် မီးစက်ကြီးတွေကို မပြင်တတ်တဲ့ စက်ပြင်ဆရာကျပြန်တော့လည်း အဆင်မပြေပြန်ဘူး။
ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ PTI ကုမ္ပဏီရှိနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ PTI ကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ မီးစက်ကြီးတွေသာ ရောင်းချတာမဟုတ်ဘဲ စက်ပြင်တဲ့ Service တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ PTI ကုမ္ပဏီက ဝယ်ယူထားတဲ့မီးစက်နဲ့ Service contract လုပ်ထားတဲ့မီးစက် (ဘယ်မီးစက်မဆို) စက်ချို့ယွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ၂၄ နာရီရဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို ချက်ချင်းရောက်ရှိလာပြီး ပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Service Contract မရှိတဲ့စက်တွေအတွက်ဆိုရင်ကော?
Service Contract မရှိရင်လည်း မီးစက်ပျက်သွားရင် 24 hours service ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ရုံပါပဲ။ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
webadmin Knowledge Sharing
Older PostAKSA ဟာ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း မီးစက် Brand တစ်ခုဖြစ်နေရတာလဲ?
Newer PostPTI Cartoon #1